FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LAB PEI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Lab Pei
Alika mifangaro mifangaro i Labrador Retriever / Shar-Pei
Brooklyn the Labrador Retriever / Chinese Shar Pei- 'Navotana tamin'ny toe-javatra niterahana i Brooklyn. Nifatotra tamin'ny tsatoka tany amin'ny faritra ambanivohitra izy, ary bevohoka ary niteraka zanak'alika. Nivoaka tamin'ny toetrandro izy tamin'ny 24/7/365, ary salama vatana izy. Rehefa avotra dia sahabo ho 2 taona izy izay niorina tamin'ny fitsapam-pahaizana momba ny biby nataony. Amin'ny 7 Jolay dia hiara-hankalaza 10 taona isika. Brooklyn dia marani-tsaina loatra noho ny mahasoa azy, tena mamy, tia karokaroka, tsy mivadika ary be fitiavana. Mino marina aho fa ny iraka hataony eto an-tany dia ny hanome fitiavana sy fanasitranana. Taorian'ny fananako azy nandritra ny 2 taona dia nanomboka nanofana azy momba ny asan'ny alika fitsaboana aho. Noraisiny avy hatrany. Nanana firaiketam-po foana tamin'ireo naratra, narary na kilemaina izy. Ny dia nataonay dia nitondra anay tany amin'ny hopitaly eo an-toerana, toeram-pitsaboana mahay, toeram-panampiana ary marary any an-trano amin'ny hopitaly. Izy no mpiara-miasa amiko tany am-piasana nandritra izay 6 taona lasa izay, niaraka tamiko ny 2 taona lasa. Izy no 'mpanampy ara-pitantanana' ahy. Izy koa dia mpiara-miasa amiko rehefa nikarakara saka avy amin'ny famonjena anay teo an-toerana izahay, ary nanangana ny tenany ho nania 1. Tena akaiky izy ireo. Mahatsiaro aho fa samy manahaka ny toetra tsara indrindra an'ny Lab sy Shar Pei izy. Ity sary ity dia any amoron-dranomasina any Brooklyn rehefa tokony ho 3 taona izy. '
Ny Lab Pei dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Shar-pei . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Koda the laboratoara / Shar-pei afangaro amin'ny 6 volana— 'Ity no alikako Koda amin'ny faha-6 volana. Nahita azy teny amin'ny arabe aho tamin'ny tokony ho 6 herinandro. Izy parasy feno volo ary nanana kankana ka nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy tamin'io andro io. Salama sy sambatra izy izao. Tena miasa izy, tia mitsako ny zava-drehetra ary tsy maintsy matory eo am-pandriana miaraka amiko. Tsy afaka mandeha na aiza na aiza aho raha tsy misy azy na misento izy. Heveriko fa mahafatifaty tokoa izy! Manana rambony miforitra mainty eo amin'ny tendrony izy ary misy teboka maizina amin'ny lelany, manidina ny sofiny ary misy fotsy eo amin'ny tratrany. Tamin'ny voalohany dia halany ny fandroana, fa izao izy mianatra ny ho tia ny rano sy milomano eny amoron-dranomasina! '
'Brooklyn the Lab Pei ao amin'ny tranomboky. Nasainay namaky taminy ny ankizy. Ny boky tiany indrindra dia momba ny biby mpikiky. '
'Brooklyn the Lab Pei ao amin'ny foibe fikarakarana / rehab. Nitsidika teto izahay nandritra ny 7 taona. 12 taona izy tamin'ity sary ity. '
'Brooklyn the Lab Pei dia hita miaraka amin'ny saka Stella. Hitanay tao ambadiky ny paositra tao an-tanàna i Stella, sahabo ho 4 herinandro hoy ny mpitsabo biby, novonoina ny reniny. Mikolokolo sy mikarakara azy i Brooklyn ary manohy manao izany. '
Dexter the Shar Pei / Chocolate Labrador Retriever mifangaro amin'ny 1 taona- 'Dexter dia feno angovo, saingy afaka miala sasatra sy mihantona rehefa ilaina. Tiany ny mitsambikina sy milalao anaty rano. Mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra izy fa rehefa fantany ianao dia tia anao. '
Dexter ilay fangaro mix Shar Pei / Chocolate Labrador Retriever amin'ny taona 1
Dexter ilay mix Shar Pei / Chocolate Labrador Retriever amin'ny fitsambikinana sy filalaovana rano 1 taona.
Dexter ilay mix Shar Pei / Chocolate Labrador Retriever amin'ny taona 1 milalao anaty rano.
Afangaro i Lucas the Labrador Retriever / Shar Pei amin'ny faha-4 taonany matory eo ambony sezalava.
Lucy the Lab / Shar Pei mifangaro toy ny alika kely amin'ny 3 volana- 'Ity i Alika Lucy. Izy dia mifangaro Lab / Shar Pei mainty. Tsy tena fantatray izay antenaina amin'ity hybrid ity, satria vitsy ny any. Nanjary alika kely mahatsiravina izy. ny alika kely sarotra, ary nampiseho Lab mahazatra izy fihetsika . Nanao izany i Lucy mitsako amin'ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra! Ankehitriny rehefa nandalo ny marika iray taona izy dia tena avy tokoa. Sariaka be i Lucy, tia ankizy sy alika hafa, ary tsy dia mivily. Mahatoky izy, nefa tsy saro-piaro, ary tena marani-tsaina. Izy dia mamaly tsara na amin'ny baiko am-bava na amin'ny tanana, ary tena tsara mpiara-miasa fanatanjahan-tena . Ny ratsy iray, na dia manana ny ketrona sy volo fohy an'i Shar Pei aza izy dia somary mandatsaka kely ihany. Iriko mba ho maro ny olona mahalala momba an'io hybrid lehibe io! Tena sambatra izahay. '
Lucy the Lab / Shar Pei mifangaro toy ny alika kely amin'ny 7 volana
'Cooter dia Shar-pei / Lab mavo mifangaro. Nentinay avy tao amin'ny toeram-pialofana biby teo an-toerana izy tamin'izy 8 herinandro. Izy vaky trano ao anatin'ny 2 herinandro latsaka. Izy dia iray amin'ireo alika hendry indrindra nifanena tamiko, ary tena be fitiavana. Ny olany tokana dia ny fahaizany mandanjalanja. Satria mbola tsy nisy nampijalina teto izy, azoko atao ny mieritreritra fa ny toetrany ihany. Saingy mbola faly aho fa nifidy azy isika. Manana zafikely 19 izahay, noho izany dia zava-dehibe tokoa fa izay rehetra azonay dia tokony ho tsara niaraka tamin'izy ireo izany. Samy tsara be tamin'ny rehetra izy hatramin'ny 20 taona ka hatrany amin'ny zaza vao teraka. '
manga maso Siberia husky alika
chihuahua mainty sy mainty hoditra
alika alika dia afrika amidy
mpiambina mpiambina alemana
lavaka sy ny Amerikana bulldog Mix